Kabtan Sergio Ramos oo doonaya inuu horay u dhaqaaqo oo uu ku guuleysto horyaal kale oo La Liga ah – Gool FM
(Madrid) 04 Juun 2020. Sergio Ramos ayaa doonaya inuu ka dhaqaaqo lambarka afaraad, isla markaana uu ku guuleysto horyaal kale oo La Ligaha Spain ah.
Dhammaadkii xilli ciyaareedkii 2018/19 waxaa uu Sergio Ramos lumiyey fursaddaas, iyadoo Real Madrid ayaa durbaba ka hartay tartan kasta kal ciyaareedkaas.
Dhaawac ayaa meesha ka saaray inuu garoomada ka maqnaanayo laga bilaabo 3 April, kumana soo laaban garoonka ilaa iyo 7-dii June, markaasoo uu dib u bilaabay inuu noqdo ciyaaryahanka ugu guulaha badan La Roja.
Hadda Ramos wuxuu wajahayaa xilli ciyaareed dhammaad ah oo tartan walba ay safka ugu jiraan.
11-kulan ayaa u harsan isaga si uu ugu guuleysto horyaalka La Liga fasal ciyaareedkan, inkastoo tartankan Los Blancos hadda uun laga sarre maray kaddib guuldarradii ka soo gaartay Real Betis ka hor karaantiilkii uu kubadda cagta geliyey Corona Virus.
Ramos wuxuu kula guuleystay Kooxda Real Madrid afar horyaalka LaLiga iyo sidoo kale afar Champions League.
Afarta koob oo horyaalka ah ayuu ku guuleystay 15 sano oo uu joogay Real Madrid kuma filna sida uu aaminsan yahay, si kastaba ha ahaatee, wuxuuna doonayaa inuu horyaal shanaad ku darsado kuwii uu ku guuleystay 2007, 2008, 2012 iyo 2017.
Waxa uu haatan tiirka u yahay kooxda, tababare Zinedine Zidane ayaana u baahan doona sida ugu fiican ee uu kabtan Ramos u hoggaamiyo kooxda Los Blancos.